PressReader - Isolezwe: 2017-09-15 - Umkhuba usekhaya ngoMagaqa - Mbalula
Umkhuba usekhaya ngoMagaqa - Mbalula
Isolezwe - 2017-09-15 - IZINDABA - KHETHA SANGWENI EseMzimkhulu
UNGQONGQOSHE wamaphoyisa kuzwelonke, uMnuz Fikile Mbalula uthi ababulali bakaMnuz Sindiso Magaqa oshone ngeSonto eledlule, abacashe ngegama leqembu i-ANC bazophenyeka izinqe maduze. UMagaqa udutshulwe ngoJulayi ephuma emhlanganweni endaweni, wangeniswa esibhedlela kwagcina kumenele ngesonto eledlule.
UMbalula ubekhuluma enkonzweni yokukhumbula uMagaqa enkundleni yezemidlalo eMzimkhulu, izolo. Uthe i-ANC akulona ikhaya labantu ababulala abanye, kufanele kuboshwe izinkabi nabazikhokhela ukuthi zibulale uMagaqa.
“Angifuni ukudalula amacebo azosetshenziswa ukubamba ababulali kodwa kufanele nazi isimo sizoshuba. Siyazi ukuthi umkhuba usekhaya kunonyawo lwemfene,” kusho uMbalula.
Ekhuluma kanje abantu bebelokhu bebuza ukuthi “Nini” bethi “Ayikho leyo nto, sihlezi sithenjiswa ubala.”
Uze wabancenga ukuthi behlise umoya babekezele.
“Umengameli uZuma akangehlise esikhundleni uma ngingawenzi umsebenzi wami. Kufanele kucace ukuthi siphethe, ngeke kube kwampunzi edla emini,” kushwabula uMbalula.
Utshele inqwaba yabantu abebegcwele itende ukuthi inkohlakalo ekhungethe isifunda iHarry Gwala izophenywa kuboshwe abantu ngokushesha.
“Akhona amaphoyisa angalungile, sizowakhipha nawo siwaxoshe ngoba awanayo indawo embuthweni wethu,” kusho uMbalula.
Ngaphambi kokuya enkonzweni uhlanganisa amehlo nomndeni kaMagaqa emzini wakhe lapho efike abona imoto ayehamba ngayo ngesikhathi edutshulwa. Imbobombobo yimvula yezinhlamvu ezaziqondiswe esihlalweni somshayeli.
UMbalula otheleke ehamba ngendiza yombutho wamaphoyisa, wemukelwe uMnuz Mxolisi Kaunda ophethe ezokuPhepha KwaZulu- Natal. UKaunda obephethe uhlelo ucele ukuba abantu baziphathe kahle emngcwabeni kaMagaqa kungasuki uthuthuva.
“Onesibhamu akosishiya ekhaya ngoba sizobe size emngcwabeni. Kuzoba namaqembu epolitiki ahlukene, ningabahhahhamezi,”
Okhulumele umndeni uMnuz Lwazi Magaqa uthe bafe olwembiza ngokushona kukaMagaqa ngoba ubelungile, kungabonakali ukuthi ungumholi. Uma esekhaya ubeba yingane azehlise.
UMagaqa uzofihlwa ekhaya kuyo le ndawo kusasa.